CUTE KIDS RECREATED ICONIC SCENES FROM “CRASH LANDING ON YOU”
No Comments on CUTE KIDS RECREATED ICONIC SCENES FROM “CRASH LANDING ON YOU”
“Crash Landing on You” ရဲ့ အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့အခန်းတွေကို ပြန်လည်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ ချစ်စရာ ကလေးငယ်များ
Are you still hung over Crash Landing on You? Don’t worry, you’re not the only one —that’safact!
Crash Landing on You ကို ဆက်ကြည့်ချင်နေတုန်းပဲလား။ မပူနဲ့။ အဲ့ဒီခံစားချက်က သင်တစ်ယောက်တည်းမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။
As we are coping with our separation anxiety we are trying to look for anything related to CLOY. From their designer outfits, stalking the casts on Instagram, and, so much more.
အိမ်တွင်းအောင်းနေတုန်း စိတ်ရှုပ်စရာတွေကို မေ့ထားဖို့ CLOY နဲ့ပက်သက်တဲ့အရာတွေကို ရှာကြည့်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ ဒီဇိုင်နာချုပ်ဝတ်စုံတွေ၊ သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ Instagram တွေကိုလည်း ရှာဖွေထားပါတယ်။
But if you want something adorable that could reminisce your CLOY addiction, we happened to discover adorable pictures of kids recreating Hyun Bin and Son Ye-jin’s iconic scenes from the fanous K-drama! Not so much infos are available online, but the viral photos were shared by Hallyu fanpage.
CLOY ကိုပြန်အမှတ်ရစေမယ့် ချစ်စရာအဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ Hyun Bin နဲ့ Ye-jin ရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ဇာတ်ဝန်းခန်းတွေကို ပြန်လည်သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ပုံကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ online မှာ အချက်အလက်များများရှာလို့မရပေမယ့်ရ ဒီပုံတွေကိုတော့ Hallyu fanpage က ဝေမျှထားတာပါ။
Photo credits to https://twitter.com/k_dramaindo/status/1236842687451414528?s=21&fbclid=IwAR1K8_5TAhA6Yw2hb4r3AHCrgkR2pmUPm-_hYE53y7UFk5rX2tVoWh3K6XY
Tags cloy, crashlandingonyou, international, korean